Iindaba ezingakumbi kwiVenkile yeApple: iivenkile ezintsha kunye notshintsho kwezinye. | Ndisuka mac
Iindaba ezingakumbi kwiVenkile yeApple: iivenkile ezintsha kunye notshintsho kwezinye.
Uninzi lwabakhuphisana neApple bathatha njengereferensi yemodeli yeshishini lenkampani yeapile kwaye bathabathe izimvo malunga noyilo kunye nezenzo ezenziwa kwiivenkile zika-Apple. Isiphumo sokwandiswa kweentengiso zeApple kwihlabathi liphela. Kwiiyure ezimbalwa ezidlulileyo sikuxelele ngeprojekthi ye Iapile ezivenkileni Iholo yeFashoni yaseAntara, iziko lokuthenga elaziwa ngokuba neyona nto ibalulekileyo emhlabeni. Iya kuba yiVenkile yesibini yeApple kwisiXeko saseMexico kwaye iya kuba neendawo eziphakamileyo ezimbini kunye nezinto ezizodwa, ezinje ngeesilingi eziphezulu kunye nomabonakude omkhulu.
Ivenkile yeApple yamva nje, yenzelwe ukuba inoluvo engqondweni yesitolo se Indawo yelizwe yokuthengisa, owabona ukukhanya ngo-Agasti odlulileyo. Kungekudala sifunde ngezicwangciso zika-Apple zamanye amazwe aseLatin America. Ukuqala ngo Brasil, iiplani zihamba ngokuvulwa kweevenkile ezimbini, enye yazo kwindawo yokugqibela yeOlimpiki. Sithetha ngayo Sao Paulo. Kwelinye icala, nakwinqanaba lokukhangela ubume besakhiwo, kunjalo Ivenkile yokuqala eArgentina. Ukufumana indawo eneemfuno zika-Apple akukho lula, ke, ukuvulwa kwisixeko saseBuenos Aires akulindelwanga kude kube ngo-2018.
I-Apple inezinye iindawo ezininzi zehlabathi, njenge-United States. Kule meko, inkampani isebenzisa isicwangciso-qhinga sokuguqula indawo okanye ukutshintsha indawo kwezinye iimeko. Yimeko ye tienda de IBurlington, eMassachusetts yintoni eza kuvala ukulungiswa ngo-Epreli 23. Kwiivenkile ze ISanta Clara Valley eCalifornia kunye Iziko lokuthenga laseWoodfield ISchaumburg, eIllinois, Inkampani iceba ukubathuthela kwenye indawo, njengoko besenzile kutshanje IWoodland Mall eGrand Rapids Michigan.
Kwezinye iimeko ezi venkile sele zineminyaka engama-35 ubudala kwaye ubuncinci ukulungiswa kwakhona kuyafuneka.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Izaziso » Iindaba ezingakumbi kwiVenkile yeApple: iivenkile ezintsha kunye notshintsho kwezinye.
Jonga ukusebenza kwangaphakathi kweMac yakho nge-iPulse, simahla ixesha elilinganiselweyo
UWalt Mossberg, intatheli eyintandokazi kaSteve Jobs, Retires